आफैँसँग भेट – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: आइतवार, असार १४, २०७७
यो संसारमा रहेर तपाईं आफ्नो जीवनमा जे–जे प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, तिनलाई प्राप्त गर्नुहोस् । तर, तपाईंको वास्तविक स्वरूपलाई पनि चिन्नुहोस् । तपाईंको वास्तविक स्वरूप तपाईंभन्दा पृथक् छैन । त्यो वास्तविक स्वरूप हो– “शान्ति” । वास्तवमा जीवनको लक्ष्य नै आनन्द र शान्ति प्राप्त गर्नु हो । हामी जति पनि कार्य गर्दछौँ, शान्तिका लागि नै गर्दछौँ । मानिसहरू घर बनाउँछन् । त्यसको साजसज्जामा लाग्छन् ताकि सौन्दर्य बढोस् । तर, जीवनलाई सफल तुल्याउने सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो हामीभित्रै छ । म जुन शान्तिका बारेमा चर्चा गर्छु, त्यो शान्ति सबैको हृदयभित्र अवस्थित छ । यो सबैका लागि एक समान हुन्छ । शान्तिका लागि आफ्नो हृदयमा लागेको प्यासलाई जुन दिन हामी बुझ्न सुरु गर्छौँ, त्यसदिन शान्तिका लागि हाम्रो खोजको पनि प्रारम्भ हुन्छ ।
जब तपाईंसँग सोधिन्छ, “तपाईं को हुनुहुन्छ ? तपाईंको आफ्नो परिचय दिनुहोस् ।” तब, कसैले आफ्नो नाम बताउन थाल्छन्, कसैले आफ्नो पद के हो भन्छन् त कसैले अरू कुरा बताउँछन् । तपाईंको वास्तविक परिचयचाहिँँ त्यो होइन । के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ– तपाईं वास्तवमा को हुनुहुन्छ ? के कहिल्यै तपाईं स्वयम्सँग परिचित हुनुभएको छ ? तपाईं आफ्नो आँखाले सबैलाई देख्न सक्नुहुन्छ तर आफूले आफैँलाई हेर्नका लागि ऐनाको आवश्यकता पर्दछ । तपाईंले ऐनामा हेर्दा के त्यहाँ तपाईंको वास्तविक स्वरूप देखिन्छ ? ऐनामा हेर्दा तपाईंको वास्तविक स्वरूप देखिँदैन किनकि तपाईंले नकाब(मखुन्डो) लगाउनुभएको छ । सबैभन्दा पहिला आफ्नो मखुन्डोलाई निकाल्नु आवश्यक छ । तपाईंको क्रोध, माया, घमण्ड अनि अज्ञानताको मखुन्डो हटेपछि मात्रै तपाईंले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई देख्न सक्नुहुनेछ । यो मखुन्डो तब मात्र हट्नेछ जब तपाईंसामु “साँचो ज्ञानरूपी दर्पण” राखिनेछ । यदि नकाब लगाएर तपाईंले ऐनामा हेर्नुभए पनि ऐनामा त्यही नै देखिनेछ । साँचो मानवता तब देखिनेछ जब नकाब हट्नेछ । मखुन्डोलाई निकालेर वास्तविक ज्ञानको ऐनामा हेर्नुभएपछि मात्र तपाईंलाई ज्ञात हुनेछ– यो संसारका सृष्टिकर्ता तपाईंकै हृदयमा विराजमान छन् ।
सबैभन्दा ठूलो खोज त– आफूभित्रको वास्तविक स्वरूपलाई चिन्नु हो । कोही हामीसँगै हरेक क्षण हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु हो । भलै हाम्रो यो शरीर उमेरअनुसार बदलिँदै जान्छ तर त्यो कहिल्यै पनि बदलिँदैन । यदि जीवनमा यो कुरालाई बुझ्नुभएन भने पनि निःसन्देह यो जीवन त बित्नेछ । तर, सृष्टिकर्ताले तपाईंलाई जुन अनमोल उपहार दिएका छन्, त्यसबाट बञ्चित रहनुहुनेछ । तपाईंलाई त्यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता रहन्छ । तसर्थ, के आवश्यक छ भने हामी आपूmभित्र भएको शान्तिको अनुभव गरौँ अनि आफ्नो आत्मविश्वासलाई अझै दृढ बनाऔँ । तपाईंले स्वयम्लाई चिन्नुभएपछि आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई पनि पहिचान गर्नुहुनेछ ।
यसै सन्दर्भमा एउटा कथा छ । दुई जना यात्रुहरू गइरहेका थिए । तिनीहरूमध्ये एकजना चाहिँ चोर थियो । चोरले यात्रुलाई सोध्यो, “दाजु,
तपाईं कता गइरहनुभएको छ ?”
ती यात्रु भन्छन्, “म धन कमाउनका लागि विदेश गएको थिएँ । अहिले आफ्नो पूरै कमाइ बोकेर आफ्नो घरतिर गइरहेको छु ।”
चोरले भन्यो, “म पनि उतै गइरहेको छु । दुवैजना साथसाथै भयौँ भने एकदमै राम्रो हुनेछ ।”
यात्रुले भने, “ठीकै छ भाइ, एकजना थिएँ, दुई जना भएर जान पाइने भयो ।”
जाँदा–जाँदा रात प¥यो । दुवैजना एउटा होटलमा एउटै कोठा लिएर बसे । खाना खानका लागि ती यात्रु तल झरेपछि चोरले उनको सामान, ओछ्यानदेखि लिएर सबैतिर खोज्यो तर उसले केही पनि फेला पार्न सकेन ।
चोर सोचमग्न भयो, “सबै ठाउँमा खोजिसकेँ । धन त कतै पनि पाइएन । आखिर यसले धनलाई कहाँ लुकाएको छ ? कतै यो झुटो बोलिरहेको त छैन ?”
भोलिपल्ट ती दुवैजना उही आफ्नो गन्तव्यतिर अघि बढे ।
चोरले यात्रुसँग सोध्यो, “के तपाईंले साँच्चै धन कमाउनुभएको छ ?”
यात्रुले भने, “हो, मैले धेरै नै धन कमाएको छु । यति धेरै कि अब मैले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नरहला ।”
बाटो लामै थियो । रात प¥यो । त्यसदिन पनि उनीहरूले कतै होटलमा बस्नुपर्ने भयो । त्यहाँ बस्दा पनि चोरले सबैतिर उसै गरी खोजी ग¥यो । यस पटक पनि उसलाई केही हात लागेन ।
भोलिपल्ट गाउँ पुग्नै लागेपछि ती यात्रुतिर फर्केर चोर भन्छ, “अब त तपाईं आफ्नो घरमा आइपुग्नै लाग्नुभयो अनि सुरक्षित पनि हुनुहुन्छ । म तपाईंसँग केही भन्न चाहन्छु । वास्तवमा म एउटा चोर हुँ । तपाईं खाना खानका लागि तल जानुभएपछि म धनको लालचले तपाईंको सामानमा खोजतलास गर्थेँ । दुवै रात मैले तपाईंको सरसामानमा खुब खोजेँ तर मैले केही पनि भेटाइन । तपाईंले केही कमाउनुभएको पनि हो कि झुटो बोलिरहनुभएको छ ?”
यात्रुले भने, “म झुटो बोलिरहेको छैन ।”
उनले चोरलाई आफूले कमाइ गरेको धन देखाउँदै भने, “तिमीले हरेक ठाउँमा मेरो धनलाई खोज्यौ । मेरो बाकस, मेरो ओछ्यान, मेरो सिरानीमुनि खोज्यौ तर तिमीले यसलाई आफ्नो सिरानीमुनि त खोजेनौ ।”
चोरले अचम्म मान्दै भन्यो, “मेरो सिरानीमुनि !”
यात्रुले भने, “तिमीले यो धन पाउनका लागि हरेक ठाउँमा खोज्यौ तर त्यहाँ चाहिँ खोजेनौ जहाँ यो थियो– तिम्रो आफ्नै सिरानीमुनि । मलाई थाहा थियो, तिमीले सबै ठाउँमा खोज्नेछौ तर आफ्नै सिरानीमुनि कहिल्यै पनि खोज्नेछैनौ । त्यसकारण तिम्रो आँखा छलेर यो धनलाई तिम्रै सिरानीमुनि राखिदिन्थेँ ।”
चोरले निराश हुँदै भन्यो, “धत् ! मैले आफ्नै सिरानीमुनि खोजेको भए ।”
ठीक यस्तै प्रकारले त्यो परम् शक्ति, ती सृष्टिकर्ता जसको खोजीमा हामी यता–उता भौँतारिरहन्छौँ । तिनलाई बाहिर खोजेर पाउन सकिँदैन । किनकि, उनी हामीभित्रै बसेका छन् । हामीभित्र नै ती सम्पूर्ण प्रकारका शक्ति विद्यमान छन् जसको उपयुक्त प्रयोगले नै हामी आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ । आफ्नो जिज्ञासा र खोजीद्वारा तपाईंले त्यो स्थानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । जहाँ स्वयम् त्यो परम् शक्ति, त्यो आनन्दको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
(यो लेख प्रेम रावतको सम्बोधनलाई सम्पादन गरी साभार गरिएको हो । उहाँ मानवता र शान्तिको विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि [email protected]लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)
उत्पादन र उपभोगभित्रको विसङ्गति
यस वर्ष माडीमा धान दिवस मनाइने